9 Khaladaad Dhimasho ah oo Goobaha ka dhigaya kuwo gaabis ah | Martech Zone
Websaydhada gaabiska ah ayaa saameyn ku leh heerarka kabashada, heerarka beddelka, iyo xitaa kanaga qiimeynta injineerka raadinta. Taasi waxay tiri, Waxaan layaabay tirada boggaga internetka oo wali si gaabis ah u gaabiya. Adam waxay i tustay degel maanta lagu martigaliyay GoDaddy oo qaadanayay in ka badan 10 ilbidhiqsi in la raro. Qofka faqiirka ahi wuxuu u maleynayaa inay keydinayaan dhowr dollar oo ku saabsan martigelinta… halkii ay lumin lahaayeen tanno lacag ah maxaa yeelay macaamiisha mustaqbalka ayaa damiintay.
Waxaan halkan ku soo kordhinay aqrinteena, wax shaki ahna igagama jiro in guusha qaar ay ahayd inaan u haajirnay Flywheel, Marti-geliye WordPress ah oo la maareeyay oo leh kayd weyn iyo a Network Delivery Content waxaa suuro galiyay StackPath CDN.
Waa kuwan 9 Khaladaad Dhimasho leh oo Kordhiya Waqtigaaga Xamuulka ah:
Ma Qafaasho - hubi in websaydhkaagu u adeegsado Kaabista si loo kordhiyo xawaaraha. Nidaamyada maareynta maaddooyinka casriga ahi waxay ku keydiyaan waxyaabaha ku jira keydka macluumaadka oo ay ku milmaan shaxanka qaabeynta si ay u soo saaraan bogga soo saaray Codsiga keydka macluumaadka iyo daabicitaanku waa qaali, sidaa darteed matoorada xajintu waxay keydinayaan wax soo saarka waqti caadi ah sidaa darteed wax weydiin ah looma baahna.
Toosiin badan - iska ilaali isticmaalka ilaha gundhigga ah ee u weecanaya bogagga kale. Oo ka faa'iideyso xiriiriyeyaasha tooska ah ee ku jira marinkaaga. Mid ka mid ah tusaale ahaan waa haddii bartaadu ammaan tahay, waxaad dooneysaa inaad hubiso in cunsur kasta oo goobta ku jira, sida sawirrada, aan loogu gudbin URL-kooda aan amniga ahayn. Taasi waxay u baahan tahay sawir kasta oo bog ah in si sax ah loogu leexiyo xiriirka aaminka ah.
Min Minification - Faylka qoraalka iyo cabirka faylka CSS waa la iskudhisi karaa iyadoo la yareynayo walxaha aan loo baahnayn (sida qadka quudinta, faallooyinka, tabta, iyo meelaha banaan. daadin. Qaar ka mid ah nidaamyada CMS sidoo kale si otomaatig ah ayey tan u sameyn karaan maadaama goobta ay ku jiraan culeysyo iyo keyd.
Sawirro Weyn - Isticmaalayaasha dhamaadka badanaa sawirrada si toos ah ayey uga soo rogaan kamaraddooda ama taleefankooda shabakadda… dhibka jira ayaa ah in dhibaatooyinkan ay inta badan yihiin dhowr megabyte. Ku dar farabadan goobta oo bartaada ayaa si gaabis ah u gaabin doonta. Qalabka sida Kraken waxaa loo isticmaali karaa kahor gelinta sawirada - ama waxaa lagu dhex dari karaa goob si toos ah u cadaadinaysa sawirada si ay u muuqdaan kuwo fiican laakiin leh cabir feyl yar.
Badhamada Bulshada ee Dhaladka ah - badhanka bulshada ee udhaxeeya waa wax laga naxo. Mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa si madax-bannaan looga raraa barta warbaahinta bulshada wax yar baa la siiyaa sida ugu dhakhsaha badan ee ay u rartaan Isku day inaad adeegsato adeegyo dhinac saddexaad ah oo si weyn u wanaajin doona waqtigooda culeyska - ama boostada ku dheji badhannada si aysan saameyn ugu yeelan xawaaraha goobtaada gabi ahaanba.
Ma jiro CDN - shabakadaha gudbinta waxyaabaha waxay leeyihiin adeegeyaal adduunka oo dhan kaydiya oo keena faylal ma guurto ah oo u dhow shakhsiga juqraafi ahaan. Adeegsiga a CDN waa hab fantastik ah oo lagu kordhin karo xawaaraha boggaaga, gaar ahaan haddii ay jiraan sawirro badan.
Waa tan faahfaahinta, 9 Tilmaamood oo lagu Yareeyo Waqtiga Xamuulka Page, ka Kala-wareejinta.
Bixinta: Waxaan ka faa'iideystay xiriiriyeyaasha xiriirka la leh intaan ku guda jirnay boostadan.